सरकारले गठन गर्यो 'आइसिटी परिषद', प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा २३ सदस्यीय समिति - Living with ICT
Home / Featured / सरकारले गठन गर्यो ‘आइसिटी परिषद’, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा २३ सदस्यीय समिति
सरकारले गठन गर्यो ‘आइसिटी परिषद’, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा २३ सदस्यीय समिति
Admin May 26, 2016	Leaveacomment
नेपाल सरकारले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि(आइसिटी) परिषदको गठन गरेको छ । २०७३ बैशाख ३० गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा २३ सदस्यीय परिषदको गठन गरेको हो । परिषदमा प्रधानन्त्री अध्यक्ष र सूचना तथा सञ्चार मन्त्री सगै बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीलाइ सह अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधि, मुख्य सचिव र ७ वटा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव परिषदको सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदका सचिव, नेपाल उद्योग बाणिज्य महांघका सूचना प्रविधि समितीका सभापति सदस्य रहेका छन ।
यसैगरी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि संघसस्थाबाट आवद्ध २ जना, विश्वविद्यालयबाट दुइ जना, सूचना प्रविधिका विशेषज्ञ २ जना र सूचना प्रविधि क्षेत्रका व्यवसायी तथा उद्यमीबाट २ जना गरि जम्मा २३ जनाको परिषद गठन भएको हो ।
परिषदमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रका संघसस्थाहरुबाट क्यान महासंघका अध्यक्ष बिनोद ढकाल र निर्मल तामांग सदस्यमा परेका छन् । यसैगरी बिज्ञको रुपमा परिषदमा इन्टरनेट सोसाइटी च्याप्टर नेपालका अध्यक्ष तथा कानुन व्यवसायी बाबुराम अर्याल, र रोमकान्त पाण्डे सदय्स रहेका छन् । विश्वविद्यालयका तर्फबाट प्रा. डा शशिधरम जोशी र डा. मनिष पोखरेल सदस्यमा रहेका छन । यसैगरी उद्योग वाणिज्य महांघका तर्फबाट सञ्जिव राजभण्डारी र व्यवसायीका तर्फबाट शुरेश कुमार रेग्मी र बसन्त बन परिषदका सदस्य रहेका छन ।
सरकारले सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट ज्ञानमा आधारित समाजलाइ रुपान्तरण गर्ने उदेश्य सहित परिषदको गठन गरेको छ । पछिल्लो समय छुटटै आइसिटी मन्त्रालय र परिषदको माग बढ्दै आएको थियो । यसअघि डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको पालोमा तत्कालिन सूचना प्रविधि उच्चस्तरिय आयोग खारेज भएको थियो ।
यहि जेष्ठ ७ गतेको मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार सरकारले २३ सदस्यीय परिषद गठन गरेको हो । सदस्यहरुको समयावधी ४ वर्षको रहेको छ । मन्त्री परिषदको निर्णयलाइ स्वागत गर्दै अब सूचना प्रविधिको विकासले गति लिने विश्वास लिएका नियक्त सदस्य क्यान महांघका अध्यक्ष बिनोद ढकालले लिभिङ विथ आइसिटीलाइ बताए ।
ICT Council nepal Nepal Government 2016-05-26
Previous ट्वीटरले १ सय ४० अक्षरको सीमा बढाउँदै
Next सामसुङले ल्यायो आँखाको नानी पहिचान गरेपछि खुल्ने ट्याब